လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် polypropylene အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်ခံစားခဲ့ရ China Manufacturer
polypropylene ဖုန် Bag,ဆေးထိုးအပ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် Bag ခံစားခဲ့,နှစ်ဦးကဖုန်ကောက်ခံရေး Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: polypropylene ဖုန် Bag,ဆေးထိုးအပ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် Bag ခံစားခဲ့,နှစ်ဦးကဖုန်ကောက်ခံရေး Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် > လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် polypropylene အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်ခံစားခဲ့ရ
 လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် polypropylene အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်ခံစားခဲ့ရ
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအထည်အိတ်သေးငယ်တဲ့အမှုန်အရွယ်အစား, ခြောက်သွေ့တဲ့မဟုတ်သော fibrous ဖုန်မှုန့်များ၏ဖမ်းယူများအတွက်သင့်လျော်သောခြောက်သွေ့ filter ကိုဖုန်မှုန့် device ကိုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ Dusting အထည်အိတ်များသောအားဖြင့်အထည်အလိပ် filter ကိုအထည် လုပ်. Non-ယက်နေကြခံစားရတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အပူချိန်နှင့်အညီသုံးမျိုးသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
အခန်းအပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ်: အဓိကအားဖြင့်လေကောင်းလေ permeability ချောမွေ့မျက်နှာပြင်, ကောင်းသောရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်တဲ့ချည်ငင်, အထည်အလိပ်နည်းပညာအဖြစ်, polypropylene နှင့် polyester ထည်၏ လုပ်. , ဖုန်မှုန့်လိုက်နာရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ချွတ်လက်သည်းရန်လွယ်ကူနှင့်အခြားအစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ပုံမှန်အပူချိန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပုံမှန်အပူချိန်မှာ flue ဓာတ်ငွေ့ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
အလတ်စားအပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ်: အဓိကအား acrylic ဖိုင်ဘာတိုတောင်းသောဖိုင်ဘာ, acrylic အခြေစိုက်စခန်းအထည်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နည်းပညာ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အလတ်စားအပူချိန်လယ်ပြင်နှင့်အလတ်စားအပူချိန်ပန်ကာအိတ်လေးအိတ်၌အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောဖုန်မှုန့်ညစ်ညမ်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလတ်စားအပူချိန်နှင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့သင့်လျော်သည်။
မြင့်မားသောအပူချိန် dedusting အထည်အိတ်: ကအဓိကအား PPS အထည်အလိပ်နှင့်မဟုတ်တဲ့ချည်ငင်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖန်ဖိုင်ဘာ, ထူးခြှနျဖန်ဖိုင်ဘာ, PTFE နှင့်အခြားမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ဖိုင်ဘာတိုးချဲ့, P84 ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါအပေါ်ကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှု, မြင့်သော filtration ထိရောက်မှု, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်နှင့်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ကုသမှု coating ပြီးနောက်ကြောင့်လည်းချေးခုခံ, ရေတွန်းလှန်, ရေနံခုခံနှင့်ငြိမ်ခုခံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောမြင့်မားတဲ့အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့အခြေအနေများနှင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဘွိုင်လာနဲ့ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ applications များ: ပြည်တွင်းဘွိုင်လာနဲ့ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံမူလကမြေမှုန့်အခိုးအငွေ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုကိုအသုံးပြုပါ, အဲဒီနောက်ကမှုအရာ, အ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုမကြာခဏပြုပြင်အခြေအနေများကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည် မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများမတည်ငြိမ်မှုများ။ လျှပ်စစ်မီးပြောင်းလဲခြင်းအိတ် filter ကိုသို့မဟုတ်ပွိုင့်အိတ်ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကျယ်ပြန့်အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိုးသည်းထန်စွာဓာတ်ငွေ့အကြောင်းအရာနှင့်မြေမှုန့်ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းမှု၏, ထို flue ဓါတ်ငွေ့၏အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်နှင့်အိတ်၏အပူချိန်ကိုခုခံ 180 200 မှက c ဖြစ်ပါတယ်။ ချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သောဒါကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ဖုန်မှုန့်အိတ်အိတ်, လျှပ်စစ်မီးနှင့်ဓာတ်တိုးခုခံယေဘုယျအားဖြင့်ရွေးကောက်တော်မူသည်။ အဆိုပါ PPS ဖုန်မှုန့်အိတ်ထက်ပိုအသုံးချဖြစ်ပါတယ်။
သံနှင့်သံမဏိထုတ်လုပ်မှု၏လျှောက်လွှာ: အသံနှင့်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးစား flue ဓာတ်ငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှု, များစွာသောမွမှေုနျ့နှငျ့ဒဏ်ငွေဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောမီးဖိုအခြေအနေများ၏အပူချိန်ကိုကွဲပြားခြားနားသည်မြေမှုန့်စုစည်းအိတ်၏အပူချိန်ကိုအချို့သောအလုပ်လုပ်အခြေအနေများအတွက်သာ 150 200 ကို C ရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အထည်အိတ်၏အပူချိန် 300 ကျော်ဒီဂရီ C မှာဖြစ်ပါသည်, အထည်အိတ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည်နှင့် အိတ်၏အပူချိန်အနိမ့်သည်။ ဒါဟာအလတ်စားအပူချိန်မြေမှုန့်အထည်အိတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်မြေမှုန့်အထည်အိတ်သုံးစွဲဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြေမှုန့်အိတ်ထဲကအတော်များများ Numex, ဖန်ဖိုင်ဘာပါဝင်သည် / P84 ပေါင်းစပ်ဆေးထိုးအပ်ဒါပေါ်, စင်ကြယ်သောဖန်ဖိုင်ဘာ filter ကိုပစ္စည်းခံစားခဲ့ရသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: polypropylene ဖုန် Bag , ဆေးထိုးအပ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် Bag ခံစားခဲ့ , နှစ်ဦးကဖုန်ကောက်ခံရေး Bag , Fluometh ဖုန် Bag , High Quality ဖုန် Bag , P84 acrylic polypropylene Filter ကို Bag , High Quality acrylic ဖုန် Bag Filter , Dacron Bag အိတ်ဖုန် Bag